Muddo dheer, warshadaha wax soo saarku aad ayey taxaddar uga leeyihiin codsiga wakiilka sii deynta gudaha ee silicone. Tani waxay wax badan ku lahaan kartaa fahamka kala duwan iyo isticmaalka badeecada
Waxaa jira ismaandhaafyo dhowr ah oo ku saabsan wakiilka sii deynta ee silica gel
Mid. Saameynta walaxda la daabacay, way fududahay inay sababto kordhinta waqtiyada daabacaadda.
Laba. U diyaari alaabada isku xidhka sariirta sagxada dhulka, taas oo keenaysa isku dhejinta liidata.
3. Muuqaalka alaabtu waa sahlan tahay in lagu soo saaro baro dhalaalaya oo dusha sare ah.
4. Way fududahay in la keeno dhaxan.
Sababta oo ah dadka marin habaabinta ah ee kor ku xusan badanaa waxay lumiyaan fursadda, cabsi darteed iyo adeegsi dambe, taasoo keentay waxqabadka liita ee wakiilka sii deynta silikoonku ma shaqeyn karo. Xaqiiqdii, isticmaalka muddada-dheer ee wakiilka sii-deynta gudaha wuxuu ka sameyn doonaa filim khafiifa miisaanka dulsaaran ee caaryada, badeecaduna way fududahay in la sii daayo, gaar ahaan alaabada silikoonka oo ay adag tahay in la sii daayo. Isticmaalka wanaagsan ee wakiilka sii deynta gudaha ayaa ah mid waxtar badan leh si loo hagaajiyo wax soo saarka wax soo saarka, laakiin waqtiga ma gaabiyo, tijaabada waxay u baahan tahay mudo isbarbardhig macquul ah.
Waxyaabaha soo socda waa in si wanaagsan loo fahmaa marka si macquul ah loo adeegsanayo wakiilka sii deynta caaryada gudaha ee silicone si loo ogaado faahfaahinta
Mid. Xulashada alaabta ceyriinka ah ee silica waa inaysan noqon mid hunguri ka raqiis ah. (alaabada ceeriin ee raqiiska ah, xitaa haddii aysan dhibaato ka jirin qalabka, waxaa laga yaabaa inay xasillooni la'aan tahay faaruqinta iyo waqtiga ay ku shaqeynayaan awgeed.)
Xulashada wakiilka disulfide waa inuu ahaadaa mid sax ah, oo xasiloonida ka wanaagsan (waxaa jira walxo kale oo daahirkoodu hooseeyo, sida ugu dhakhsaha badan ee alaabta loo kariyo, ayaa ka sii fiican, laakiin tan xasilloonida ayaa ka wanaagsan)
3. Ha aadin xag-jirnimada. (sababtoo ah maaddada ku jirta baaruudda oo aan ku filnayn, gaar ahaan xulashada wakiilka dhakhsaha u daaweynaya, dusha sare waa mid aad u wanaagsan. Xaqiiqdii, qallooca kalluumeysiga lama dhammaystirin, sidaas awgeed dhaxan ayaa soo bixi doonta, taas oo aan laga yaabo inay sabab u noqoto gudaha diirid)
4. Isticmaal qaddarka ku habboon. (waa kaliya kaaliye, ma aha doorka ugu weyn. Isticmaalka macquulka ah ee alaabta ceeriin, qalabka caawinta ah iyo farsamada farsamada ayaa ka tarjumeysa qiimaheeda.)